Posted by ကို Tranquillus | အောက်တိုဘာ 2, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
Cordial Pro: ဒါဘာလဲ။
ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုသင့်ရဲ့အမျိုးမျိုးသောအရေးအသား software ကိုမှဖြည့်စွက်တဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ခွင့်ပြု အဆိတျပွေဆေး သင်၏မူလစာမျက်နှာမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏စာသားများ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်စေရန်၊ ပြင်သစ်အရေးအသားသို့မဟုတ်အခြားဘာသာစကားဖြင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုများတိုးတက်ရန်နှင့်သင်၏စာဖတ်ခြင်းတွင်အချိန်များစွာသက်သာစေရန်ခွင့်ပြုရန်သဒ္ဒါ၊ ဘာသာစကား၊ စာလုံးပေါင်းနှင့် syntactic အမှားများကိုပြင်ဆင်ပါ။ နှင့်စာသားပြင်ဆင်ချက်။
Cordial Pro ကဲ့သို့သောကိရိယာသည်အမှားအယွင်းမရှိဘဲသို့မဟုတ်လုံးဝမပါ ၀ င်သောအရည်အသွေးရှိသောအကြောင်းအရာများကိုပေးနိုင်ရန်အတွက်ကျွမ်းကျင်သောနယ်ပယ်တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အရာကမျှစစ်မှန်သောလူ့ညွှန်ပြသူကိုအစားထိုးလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း Cordial Pro သည်အမှားအယွင်းများနှင့် syntactic အမှားများကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်ခွင့်ပြုထားပြီးစီးပွားရေး၌ရိုးရာအသုံးပြုမှုအတွက်များသောအားဖြင့်လုံလောက်နေဆဲဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုကားအဘယ်သူနည်း
သငျသညျပြီးသားတဲ့ professional အရေးအသားများမှာ, သို့သော်ဤကိစ္စတွင်မပါလျှင်တစ်ဦးစာလုံးပေါင်း-တည်းဖြတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုမလိုအပ်တဲ့ထင်ရစေခြင်းငှါအသုံးပြုပါ။ အမှန်စင်စစ်ဆော့ဖ်ဝဲများ၏အများအပြား features တွေသင်ကခွင့်ပြုမည့်အစားနာရီမိနစ်မဆိုအမှား detect ရန်သင့်ကျွမ်းကျင်သူမျက်စိ၏အကူအညီနှင့်အတူခွင့်ပြုလတံ့သော, သင့် replays ပေါ်တွင်သင်တစ်ကယ့်ကိုသိသိသာသာအချိန်ကုန်သက်သာပါလိမ့်မယ် နှင့်သင့်အမြတ်အစွန်းအချိန်ဇယားကိုတိုးမြှင့်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်စာအရေးအသားနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်တဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးချင်းစီကပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိုမိုရှုပ်ထွေးမျိုးကွဲနှင့်အတူအဆင်ပြေမဟုတ်ပါလျှင် သင်ပြစ်မှားကြပြီးသားသင့်ရဲ့ကိုးကားသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်၏ထက်ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ခဲ့, သင်သည်သင်၏အလားအလာများအတွက်အလုပ်အကိုင်အလုပ်ဖို့ဖျောင်းဖျခဲ့ကြသည်ရှိရာအခွအေနေရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့်ကံမကောင်းတာကသင်၏အများအပြားစာလုံးပေါင်းအမှားတွေခဲ့ကြပေမည်အခြားသူတွေနဲ့ ဒါကြောင့်အမှားများ၏အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်. ယုံကြည်အဖြစ်သင့်အဆိုပြုချက်ကိုအလေးထားစဉ်းစားခဲ့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အလားအလာကိုသင့်ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံခဲ့ပေ။
ဖတ်ရန် သင့်ရဲ့အရေးအသားအတွက်အကြောင်းအရာနှင့်ပုံစံ Master
အမှန်စင်စစ်, ပြင်သစ်အတွက်မကောင်းတဲ့စာလုံးပေါင်းသို့မဟုတ်သဒ္ဒါဖြစ်တောင်မှအရေးအသားနဲ့ဘာမှရှိသည်လက်စွဲစာအုပ်အရောင်းအထဲတွင်မကြာခဏယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်ကွဲပြားမရှိခြင်းနှင့်အတူပြောရလျှင်ပါ! ဒီသဘောနဲ့, ရှင်းလင်းပြသားသောသံသယရှိ syntax နှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ဤစိုးရိမ်ပူပန်မှု၌သင်တို့၏စာရွက်စာတမ်းများစေမည်ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုကဲ့သို့သောပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုသို့သော်ဘီနင်, မရှိတော့သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်!
ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုလည်း WordPress ကိုနဲ့တူပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်သောသူကို web အယ်ဒီတာများနှင့်ဘလော့ဂါများမှဝတ်ပြုကြလော့။ အမှန်မှာဒီသမ်မာကမျြးကဲ့သို့သော software များမပါဘဲအွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေဆုံးမခြင်းနှင့်သင့် browser အပေါ်တိုက်ရိုက်ရေးသားဖို့အလွန်ကြီးစွာသောအကူအညီဖြစ်လိမ့်မည်။
သငျသညျနေ့စဉျနေ့အီးမေးလ်များရေးသားဖို့အသုံးပြုပါတယ်နှငျ့သငျသေချာပေါက်သင့်ရဲ့ copy နဲ့ paste လုပ်ပါအချိန်မရှိဘူးဆိုပါကထိုမှတပါး, သေချာပေါက် website တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုအကြီးအအကူအညီဖြစ်လိမ့်မည် အလိုအလျောက် corrector တပ်ဆင်ထားပင်စကားလုံး Processor ကိုရိုးရာသတ်ပုံအပေါ်စာသားကို။
အဆိုပါအင်္ဂါရပ်များရင်းနှီးစွာ Pro ကို
ဒီဆော့ဗ်ဝဲ package ကိုသင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အကျိုးစီးပွားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များတွင်အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤတွင်ရင်းနှီးစွာ Pro ကို၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များအကျဉ်းရှင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာအားလုံးအထက်ပါရိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလိုအလျှောက်အားလုံးသင့်မီဒီယာနှင့် software များအသုံးပြုခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ဖို့လို၏စုစုပေါင်းမရှိခြင်းရန်ပေါင်းစည်းမှုဖြစ်ကောင်းပညာရှင်ပီသစွာရင်းနှီးစွာ Pro ကို၏နံပါတ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကရှင်းရှင်းလင်းလင်း interface ကို, Ergonomics နှင့်ဆွဲဆောင်မှုပူဇော်ဖို့ကြွလာသောအခါလည်း optical အရည်အသွေး, ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုတန်ဖိုးရှိသောအချိန်ဆုံးရှုံးရှောင်ရှားရန်အလွန်အကျွံသုံးစွဲဖို့တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူလှုံ့ဆျောပေးမညျဖွစျကွောငျး, အဘယ်သူမျှမ slouch ဖြစ်ပါတယ် ထို့ကြောင့်သင့်အဖွဲ့များသို့မဟုတ်သင်ကိုယ်တိုင်၏လုပျငနျးထိရောက်မှုတိုးပွားလာ။
ထိရောက်မှုအဆင့်ကိုလည်းဒီနေရာမှာ Cordial Pro က 90% ပြင်ဆင်မှုနှုန်းကိုဂုဏ်ယူစွာပြသတဲ့အတွက် Word ထက်သုံးဆပိုများပါတယ်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်စာလုံးပေါင်း၊ စာလုံးပေါင်း၊ သဒ္ဒါနှင့်စာစီစာရိုက်အဆင့်တွင်အရည်အသွေးမြင့်တင်ဆက်မှုတစ်ခုအတွက်သင်၏မျက်လုံးများကိုပိတ်ထားခြင်းဖြင့်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။
အောင်မြင်စွာအဖြစ်ကျေနပ်, ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုသင်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကျမ်းများ၏အရည်အသွေးတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့ 190 000 အဓိပ္ပာယ်နှင့်ပိုပြီးထက် 4,6 သန်းပြောရလျှင်လင့်များထက်ပိုမိုအပါအဝင်အကြောင်းအရာထဲမှာအဘိဓါန်များကြွယ်ဝစာကြည့်တိုက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်တစ်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်မှုနှုန်းရရှိရန် သငျသညျသက်တမ်းတိုးရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
၎င်း၏စျေးနှုန်းကျောင်းသားတစ်ဦးအဘို့မဟုတ်ဘဲမြင့်မားသည်ပေမယ့်, ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုနေဆဲအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသင့်ရဲ့အရေးအသား၏အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့စာလုံးပေါင်း tools တွေကိုမှလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးပေးထားပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုအများဆုံးရှုပ်ထွေးစမ်းသပ်မှုများ၏အများစုဆင်းလက်တတ်၏။ အမှန်မှာကုန်သွယ်ရေးစာနယ်ဇင်းများကကောက်ယူ 23 စမ်းသပ်မှု၏, ရင်းနှီးစွာ Pro ကို 20 ကြိမ်ပိုကောင်းစစ်, စံချိန်တင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည်!
ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုတစ်နည်းနည်းတစ်ဦးက Apple ထုတ်ကုန်များကဲ့သို့လွယ်ကူပြီးအလိုလိုသိအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာထိုဆော့ဖ်ဝဲကိုသငျသညျကွန်ပျူတာများသို့မဟုတ်ရုံးမသိကြလျှင်ပင်သုံးနိုင်တယ်။ ဒါဟာထူထောင်ရန်မှာအားလုံးအချိန်မဆုံးရှုံးဖို့အလိုအလြောကျတပ်ဆင်ပြီးနောက်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသဟဇာတ applications များ (စသည်တို့ကို web browser ကို, Word,) နဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး။
ဖတ်ရန် အီးမေးလ်က template ကိုအစည်းအဝေးတစ်ခုရှိ၎င်း၏ပါဝင်မှုကိုကြေညာရန်
ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုကျိန်းသေပညာရှင်များများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်ဆိုလျှင်, အဲဒါကိုသူတို့ရဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပညာပေးအသုံးပြုရန်သင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိမေးမြန်းဖို့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။
ဆော့ဖျဝဲ၏ဤအမျိုးအစားကိုသုံးပြီးသူမ၏ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုအဓိကအားဖြစ်ရပ်အများစုအတွက်အမှားအယွင်းများကိုရှင်းပြမဟုတ်နှောင့်အယှက်မယ့်အစားအဆိုတင်သွင်းမည်သူပညာရှင်များအဘို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည် အများဆုံးပြည့်စုံလေ့ကျင့်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအချို့ရှိနေသော်လည်းအချိန်နှင့်ထိရောက်မှုကိုရဖို့ရန်မှန်ကန်သော။
ထို့အပြင်မှုနှုန်းသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်အများစုထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားကြောင်း, ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းကျောင်းသားတစ်ဦးဘတ်ဂျက်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, ပိုမိုစာလုံးပေါင်းမရှိသလောက်အမျိုးသားပညာရေးအားဖြင့်လိုလိုလားလားရှုမြင်ကြသည်နှင့် ယေဘုယျအားဖြင့်ပညာရေးနှင့်သင်သည်ထိုအခွင့်အလမ်းတစ်ခုလျှော့စျေးကျောင်းသားရင်းနှီးစွာ Pro ကိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည် Cordial Pro ကိုမည်သည့်စျေးဖြင့်ဝယ်သင့်သနည်း။
သငျသညျပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်စေသင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်သင်မှန်ဘို့, ရင်းနှီးစွာ Pro ကိုသင့်ရဲ့မိတ္တူအမိန့်မှလက်ခံယုံကြည်နေပါပြီ!
သို့သော်သတိပြုရမည်မှာ၊ အကယ်၍ သင်သည်ပညာရှင်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ငွေ ၁၉၉ ယူရိုနှင့်သင်တစ် ဦး ချင်းကျောင်းသားသို့မဟုတ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ၉၉ ယူရိုကိုပေးရလိမ့်မည်။ သိသာထင်ရှားသောပေါင်းလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ၏အရည်အသွေးကိုကြည့်။ တရားမျှတသည်။
ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတည်းဖြတ် Software များရင်းနှီးစွာ Pro ကိုစာလုံးပေါင်း။ နိုဝင်ဘာလ 21st, 2018Tranquillus
အောက်ပါMaxicours: စျေးပေါအွန်လိုင်း tutoring ၏ရည်ညွှန်း